महन्थलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाबुराम र उपेन्द्रको प्रस्ताव, जवाफको प्रतीक्षा ! - Sidha News
महन्थलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाबुराम र उपेन्द्रको प्रस्ताव, जवाफको प्रतीक्षा !
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीका लागि तयार रहन महन्थ ठाकुरलाई प्रस्ताव पनि पठाएका छन् । जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि सघाउने गरी कुराकानी अगाडि बढेको अध्यक्ष भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार एवम् जसपाका केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप पाण्डेले बताए ।
उनले भने, ‘अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुरलाई प्रस्ताव पठाइसक्नु भएको छ । महन्थ ठाकुरले जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कि ओलीलाई साथ दिने उहाँमा निर्भर छ । उहाँको जवाफको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।’
अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवले आजै एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गरेका छन् । उनीहरु जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकारात्मक रहेको बताइएको छ । यद्यपि अझै छलफलहरु जारी रहेको छ ।
जसपा नेपालका एक कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री हुन तयार नभए माधवकुमार नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईबीच फोनमा कुराकानी भएको थियो भने उपेन्द्र यादव र माधव नेपालबीच प्रत्यक्ष भेटघाट भएको ती नेताले बताए ।
पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा यसअघि सहमति भएको थियो । दुवैजनाको हस्ताक्षरबाट विज्ञप्ति पनि जारी भएको हो । तर अध्यक्ष ठाकुर र पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एमालेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ । यसले गर्दा जसपा नेपालको एकतामा संकट उत्पन्न भएको छ ।
पार्टीको जेठ ८ र ९ गतेको लागि जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको छ । अगामी राजनीतिक विषयमा कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो तर त्यो बैठक बस्ने कि नबस्ने नै अन्योल रहेको छ ।
सिंहदरबारमा यतिबेला अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् । सो छलफलपछि उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल हुने बताइएको छ ।